Maxaa Ka Cusub Shirweynaha Xisbiga WADDANI. | Hargeysa World~Herald
Maxaa Ka Cusub Shirweynaha Xisbiga WADDANI.
UncategorizedMaxaa Ka Cusub Shirweynaha Xisbiga WADDANI.
Waxaa maalmaha inagu soo saameelan qabsoomi doona Shirweynaha Golaha Dhexe ee xisbiga WADDANI. Shirweynahan oo mar hore dib u dhac ku yimi ayaa loo qoondeeyey inu qabsoomo 15 iyo 16 bishan Novembar. Shirweynahan oo lagu dooran doono hoggaanka xisbiga. waxaa la dooran doonaa Musharraxa Xisbiga, Guddoomiyaha, Ku-xigenkiisa iyo Xoghayaha. Shirweynahan uu qabsan doono xisbiga WADDANI ayaa la aaminsanyhay in uu keeni doono isbedel ballaadhan oo ku dhici doona haykalka iyo qaab dhismeedka xisbiga.
xisbigu waxa uu sameeyey isbdel. Xogaha uu helaayo Warbaahinta Hargeysa waxay sheegaysaa in guddooiyaha xisbiga lagu wareegin doono Xirsi Xaaji Hasan. ka dib markii xisbigu isla qaatay in Musharraxnimada uu qaato Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro.MAXAA